अर्थ वाणिज्य – Yuwa Aawaj
कठमाडौँ : विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि रु सात अर्ब २० करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनलाइन शिक्षाको स्तर वृद्धि तथा विपन्न एवं कमजोर विद्यार्र्थीका लागि शैक्षिक संस्थाहरूमा पहुँच विस्तार गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैंकबाट प्राप्त हुने उक्त रकमबाट गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच सुधार र विद्यार्थीलाई श्रमबजारमा माग भएका सीपहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फरिस हदद–जर्भोस व्यक्त गर्नुभएको छ । “मानव पूँजी विकास तथा सबल पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु कोभिड–१९ को महामारीका बेला अपरिहार्य भएको छ”, यहाँस्थित बैंकको देशीय कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।-रासस
काठमाडौं : विगत १० महिनामा नेपाल आयल निगमले १३ पटक पेट्रो'लियम पदा'र्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । यति हुँदा पनि गत बर्ष १२ अर्व नाफा कमाएको निगमलाई यो बर्ष २ अर्व ५० करोड नोक्सा'न भएको छ । गत साउन महिनामा पेट्रो'लको मूल्य प्रति लिटर १०४ रुपैयाँ मात्र थियो । निगमले गत साउनदेखि जेठको दोस्रो सातासम्म अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजनको नाममा १३ पटकसम्म मूल्य बृद्धि गर्दा पेट्रो'लको मूल्य १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको हो । गत मंसिर महिनासम्म डि'जेल प्रतिलिटर ९१ रुपैया कायम रहेको थियो । अहिले डिजेलको मूल्य बढेर १०८ रुपैयाँ पुगेको छ । गत बर्ष ६४ रुपैयाँ रहेको हवाई इन्धनको मूल्य अहिले बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । वर्षभर नै पेट्रो'लियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा पनि निमग यो बर्ष मासिक १ अर्ब २० करोड नो'क्सानमा रहेको छ । यो बर्ष १३ पटकसम्म मूल्य बढाउँदा पनि निगमले हालसम्म साँढे दुई अर्ब रुपैया नोक्सा'नी खाएक
निषे'धाज्ञा अगाडि शर्मिला गुरागाईंका हात खाली हुन्थेनन्। बिहानदेखि बेलुकीसम्म लुगा सिलाउने मेसिनमा खुट्खुट् पार्ने खुट्टाले पनि आराम पाउँथेनन्। अचेल उनी यो सबै 'मिस' गरिरहेकी छन्। कहिलेकाहीँ आएर टेलर सफा गर्छिन्। तारकेश्वरको वडा-९ कार्यालय नजिकै उनले सात वर्षअघि बिए'न्डसी प्रब'शिक्षण केन्द्र खोलेकी हुन्। त्यसयता उनले यसैबाट घर, छोराछोरीको पढाई खर्च धानिरहेकी छिन्। श्रीमानको न्यू'रोडमा जुत्ता पसल छ। निषे'धाज्ञामा दुवैको व्यवसाय ब'न्द भए पनि घर चलाउन हम्मे परेको छैन। शर्मिला भन्छिन्, 'बचत गरेकाले केही महिना बन्द हुँदा खान समस्या हुँदैन। आम्दानी धेरै भयो भनेर अनावश्यक ख'र्च गर्ने बानी छैन मेरो। बचाउन सकेको भएर अझै छ महिना बन्द भए पनि आफ्नै कमाइले घर ख'र्च गर्न पुग्छ। श्रीमानको आश गर्नु पर्दैन।' टेलरबाट दैनिक तीनदेखि पाँच हजार क'माउँथिन् उनी। १८ हजारमा तीन कोठा भाडा लिएकी छन् जसमा लु
सरकारले फेरी बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, अब प्रति लिटर !
काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढेको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार आजदेखि लागू हुनेगरि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। निगमकाअनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक) को मूल्य लिटरमा दुई रुपैयाँले बढेको छ। नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२३ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०६ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फको हवाइ इन्धनको मूल्य ७८ रुपैयाँ कायम गरिएको निगमले जनाएको छ। खाना पकाउने ग्याँस र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोग हुने हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ ।भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्य अनुसार १५ दिनमा १ अर्ब १० करोड घाटा हुने अवस्था आएपछि मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको दाबी छ । अझै पनि १५ दिनमा ७१ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको निमगका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् । अन्
Jun42021 by Yuwa AawajNo Comments
एसटीसीको ग्यास प्रति सिलिन्डर रु ११२० मात्रै, कुन कुन खाद्यान्न कति मूल्य ?
काठमाडौं : सरकारले साल्ट ट्रेडिड् र खाद्य ब्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले बिक्री गर्ने ग्यास तथा खाद्यान्नको मूल्य २० प्रतिशतले घटाएको छ। बजेट मार्फत घोषणा गरेको खाद्यान्न तथा ग्यासमा हुने छुट शुक्रबारबाट लागु हुने छ। को'भिड अवधिभर हुने छुटको उपयोग गर्न सरकारी संस्थानले सुचना जारी गरेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यावस्था कम्पनी लिमिटेडले आफुले बिक्री गर्ने सामाग्रीमा २० प्रतिशत छुट दिनेछन्। १४ सय रुपैयाँ प्रति सिलिन्टर पर्ने एसटीसी ग्यासमा २८० रुपैयाँ कम घटेर ११२० रुपैयाँमा पाइने छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय- व्ययको वजेट वक्तव्यको "राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान" कार्यक्रमको बुदा नं.५५ मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरे'शन लिमिटेडवाट विक्री हुने बस्तुमा छुटको घो'षणा गरेको थियो। जसमा चामल, पिठो, दाल, नून, खानेतेल, चिनि, तथा खाना पका
काठमाण्डौँ सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको खाद्यान्नसहित अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा २० प्रतिशत छुट दिन थालिएको छ । बिहीबार सरकारी निकायका दुई व्यापारिक संस्थानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । सरकारले बजेटमार्फत घो'षणा गरेको खाद्यान्न लगायत तोकिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा राहत छुट दिन थालिएको संस्थानहरूले जनाएका छन् ।खाद्य तथा व्यापार कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने चामल र कर्णालीको सिमीमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ'बाट बिक्री वितरण हुने पिठो, चिनी, नून, भटमासको तेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै अब साविकको मूल्यमा कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने चामलमा २० प्रतिशत कम मूल्यमा चामल पाइने भएको छ भ
काठमाडौं : सरकारले जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार पुर्याइएको बताएका हुन् । उनका अनुसार वृद्धा भत्ता वृद्धिसँगै सबै किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आयोजना विस्तारका लागि १४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सबै खाले श्रमिक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरुलाई समेत सो योजनामा समेटिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यता : सरकारले घर भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरुलाई निषेधाज्ञाको समयमा ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी, निजी र सहकारीका भावनमा सञ्चालन भएका उद्योगहरुले निषेधाज्ञा समयअवधिभर ५० प्रतिशत भाडा छुट पाउने जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं : पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका महिलाले अब ४० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् । विवाह नगरी बसेका महिलाले पनि ४० वर्ष कटेपछि भत्ता पाउनेछन् । तर, ४० वर्ष कट्दैमा सबैले भत्ता पाउने छैनन् । सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भए पनि आर्थिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेका महिलाले मात्र एकल महिला भत्ता पाउनेछन् । सरकारले भर्खरै मात्र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । ६० वर्ष नाघेका एकल महिला भने सबैले भत्ता पाउने व्यवस्था कायमै छ ।यसअघि ऐनको दफा ७ मा ६० वर्ष उमेर पुगेका असहाय एकल महिलाले तोकिए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा सरकारले तोकेको असहाय एकल महिला भत्ता पाउने उल्लेख थियो । यस्तै ६० वर्ष उमेर नपुगेक
May232021 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौ : अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ५ अर्बको हारा'हारीको बजेट ल्याउने गरी कार्य गरिरहेको छ । यसवर्ष कामदारको तलव वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गरिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृद्धि हुन लागेको हो । गत वर्षको हारा'हारीमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि सामाजिक सुरक्षमा नै थप १३ प्रतिशत लाग्ने आंकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले चालुआर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षा गरी १३ खर्ब ४४ खर्ब ६८ करोड बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६करोडको बजेट अनुमान गरिएकोमा यथार्थ रुपमा १० खर्ब ९१ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यति नै आकारको बजेट हुने औप'चारिक खाका तयार नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले १६ खर्ब ५ अर्ब जतिको बनाउने तयारी थालेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रिय योजना
काठमाडौ : अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई ति'व्र बनाएको छ । यो वर्ष करिब १७ खर्बको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मध्यवधी निर्वाचनको तयारीमा रहेकाले केही लो'कप्रिय कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । जसअ'न्र्तगत कर्मचारीको तलब बृद्धि, बृद्ध भत्ता बृद्धि लगायत छन् । कोरो'ना महामा'रीका कारण भत्ता र तलब बृद्धिमा सरकारलाई दबाब भएपनि थोरै भएपनि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रो'त बताउँछ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै बृ'द्धभत्ता र तलब बढाउने घोष'णा गरिसकेका छन् । जसकारण पनि उनी थोरै भएपनि बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् । गत वर्ष पनि कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । कर्मचारीले पनि तलब बृद्धिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । नेपालमा सरकारबाट तलब खाने करिब ६ लाख कर्मचारी तथा शिक्षक छन् ।-दृष्टिबाट थप समाचार, नवलपरासीका व्यवसायीले दिए ६७ थान अक्सिजन सिलिन्डर
७. के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । (1084)